Iiraan oo dalbanaysa in Jabuuti iska bixiso deynta ay ku leedahay. – Xeernews24
Iiraan oo dalbanaysa in Jabuuti iska bixiso deynta ay ku leedahay.
5. Juli 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Hay’ad dawlada Iiraan u qaabilsan deyn bixinta ama dabooliga dhinaca amniga ee deymaha la qaadanayo ayaa soo saartey wadamo deynta ka qaatey dawlada Iiraan oo aan walli iska bixin.
Wadamadaas waxaa ku jira Jabuuti oo lacag Iiraan leedahay lagu dhisay baarlamaanka dalkaasi sida ay sheegtay haweenay u hadashay hay’adaas dawliga ah ee reer Iraan.
Hay’adan ayaa daboosha baahiyaha aan saliida ku xidhneyn sidda macdanta, sibidhka iyo ganacsiga guud. Marka dawladuhu lacagtaas amaahdaan waxa damaanada dhinaca amniga lacagtaas bixisa hay’adaas dawladu leedahay.
Wadamada kale ee lacago lagu leeyahay ayaa lagu sheegay in ay ka mid yihiin;Sri Lanka, Suudaan, Kuuba iyo Simbabwe.
Hay’adan ayey dawlada Iiraan aasaastey sannadii 1973 waxana loogu tala galay in ay daboosho baahiyaha bariga dhexe iyo Qaaradda Afrika.
Dawlada Jabuuti Ayaan welli wax jaweaabna ka bixin hadalka ka soo yeedhay haweenaydaas reer Iraana ah.
Sidda la wada ogyahay Dawlada Jabuuti ayaa dalka Iraan xidhiidhka u jartay sababta keentay in Iiraan loo jaro ayaa ahaa dalab uga yimid dalka Boqortooyadda Sacuudi Carabiya oo coolaad gaamurtay kala dhaxayso dalka Iraan.
Iraan maaha dalka qudha ee Jabuuti ku yeeshay dayn ee waxaa jiraa dalal fara badan oo daymo iyo arimo kale oo siyaasadeed jabuuti ugu haysta in lacago xad-dhaaf ah ku leeyihiin wadamada waxaa ka mid ah dalka Immaaraddka Carabta iyo shirka DPW.
Sidda shacabka reer Jabuuti loo sheegey Dhismaha baarlaamanka Jabuuti ma ahayn dayn ay dawladda Iraan bixisay ee wuxuu ahaa deeq Jabuuti loogu deeqay dib u hayntay dhismaha guriga baarlaamaanta in ay hadda uun Iraan dayn dalbato waa ganaax iyo dharbaaxo siyaasadeed oo Iraan la heshay taliska Jabuuti oo looga aargoosaan sidday Jabuuti ula safatay xulafadda Sacuudiga ee dalka Iraan lidiga ku ah.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/03/Guelleh.jpg 590 458 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-07-05 10:03:492019-07-05 10:03:49Iiraan oo dalbanaysa in Jabuuti iska bixiso deynta ay ku leedahay.
Maxaad ka Ogtahay Xidhiidhka hore kala dhaxeeyay Soomaalia iyo Guinea? Itoobiya ma dib bay u socotaa?